လမ်းနှင့်တံတား (FYT-1) ၏အထူး "Fuyitan" ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း - တရုတ် Changshu Baode တံတားအစိတ်အပိုင်း
အထူး "Fuyitan" ရေစိုခံလမ်းမကြီး၏အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်တံတား (FYT-1)
အဆိုပါ အထူး " Fuyitan " ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း ၏ လမ်းနှင့်တံတား (FYT-1)
မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, စည်ပင်သာယာဆောက်လုပ်ရေးရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသည်ကြီးမားသော - စကေးလက်ဝါးကပ်တိုင် - မြစ်တံတား, ခုံးကျော်တံတား, viaduct နှင့် Expressway ပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်နှင့်များစွာသောစီမံကိန်းများကိုပို့စ်အသစ်တခု type ကိုချမှတ် - stack ဆေးဆိုးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထဲမှာသံမဏိဘား လမ်းကိုထိခိုက်ခြင်း, မျက်နှာပြင်နှင့်လမ်းမျက်နှာပြင်ကနေတံတားရေယိုစိမ့်ကိုသာသံမဏိပန်းကန် corrode မည်မဟုတ်ပါလျှင်ရာအရပျကွန်ကရစ်အားနည်းလင့်များများမှာ - အတွက် - အထူးသဖြင့်သွန်း၏ပူးတွဲအစိတ်အပိုင်းများ, သံချေးကုသမှု - တံတားကုန်းပတ်ဆန့်ကျင်ဖို့အကြောင်းမဲ့ကြပြီမဟုတ် မျက်နှာပြင်, တံတားဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု, တံတားအောက်ရှိယာဉ်နှင့်လိုင်းပျက်စီးစေ, မြို့၏အလှအပအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒါကြောင့်တံတားနှင့်လမ်းမျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကြောင့်တံတားနှင့်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်၏ရေစိုခံတာမှအလွန်ကြီးစွာသောအရေးပါမှုပူးတွဲရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါလမ်းနှင့်တံတားရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းက၎င်း၏အထူးစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ, 1-3 ကြိမ်၏ထပ်ခါတလဲလဲမှုတ်လိမ်းထွက်ယူသွားတတ်၏, နှင့်သိသိတင်နှင့်တံတားကုန်းပတ်၏ချုံ့၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ကရစ်တံတားကုန်းပတ်သို့မဟုတ်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အက်ကွဲထက်နည်း2မီလီမီတာဖြစ်တဲ့အခါ, ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းရေစိုခံ၏လိုအပ်ချက်များသေချာစေရန်သကဲ့သို့, Non-ကွဲအက်၏လိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပုံပျက်ရကြလိမ့်မည် ... တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းရေစိုခံအလွှာကောင်းသောသက်တမ်းရှိပါတယ်, ဝန်ဆောင်မှုဘဝအပူချိန်-15 ကိုအသုံးပြုပြီး, 20 နှစျကျြောဖြစ်ပါတယ် ℃ ~ 90 ℃ , ကွန်ကရစ်ခင်းအပူချိန် 150 ကတ္တရာအကြောင်းမဲ့ခံရပြီးနောက်၎င်း၏ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်မထိခိုက်ပါဘူး။
အဆိုပါရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းတစ်ကော်အင်အားသုံးတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ Anti-ညှပ်အင်အား, ကောင်းတစ်ဦးရေစိုခံပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်, ပုံပျက်သောတစ်ဦးသင့်လျော်သောငွေပမာဏကိုမှအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပြီးအပူခုခံ, ခြေရင်းအလွှာ၏ချေးခုခံနှင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အော်ဂဲနစ်ဆံ့မခံပါဘူး အရည်ပျော်ပစ္စည်း, Non-အဆိပ်သင့် non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့, တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းစိုစွတ်အခြေစိုက်စခန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအအေးဆောက်လုပ်ရေးနိုင်ပါတယ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်အဆင်ပြေ, ဖျန်းသို့မဟုတ်ခြစ်ခံရနိုင်သည်, ရေစိုခံ, အရည်အသွေးကောင်းရှိပြီးပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကောင်အထည်ဖော်မှုစံ: JT / T535-2004 လမ်းနှင့်တံတားများအတွက် Waterborne ကတ္တရာ-based ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း
0.3MPa, 30 မိမှာအဘယ်သူမျှမ seepage
Non-လောင်သောအသံ 20 ကြိမ်
အယ်လကာလီခုခံ (20 ℃ )
Ca (OH) တွင်မူမမှန်ခြင်းမရှိပါ215 ရက်
ဆားယဉ် (20 ℃)
15 ရက် 3% ဆားရေထဲမှာအဘယ်သူမျှမမူမမှန်ရှိပါတယ်
မြင့်မားသောအပူချိန်ညှပ် (60 ℃) MPa
burst နဲ့ရေ seepage ခုခံ (MPa)
exposure ဘီး 0.7MPa ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှု (100 ကြိမ်, 0.3MPa ရေဖိအားမှာရေ seepage ကြိတ်
အဘယ်သူမျှမစလစ်, စီးဆင်းမှု, ယို
1. လမ်းနှင့်တံတား၏ရေစိုခံအဆိုပါမျက်နှာပြင်: အထူးရေစိုခံကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ကုန်းပတ်ကတ္တရာကွန်ကရစ်ခင်းဖို့အဆင်ပြေအောင်။
ရေစိုခံ 2. ခေါင်မိုး: ခေါင်မိုးသည်သို့မဟုတ်အက်ကြောင်းထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းခံနိုင်ရည်ဂုဏ်သတ္တိများ crack, မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သည်။
မြေအောက်အကျင့်ကိုကျင့်၏ 3. waterproof: စသည်တို့ကိုကွန်ကရစ်အတွင်းပိုင်းနံရံကြမ်းပြင်, ဓာတ်လှေကားသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ပိုက်လိုင်းအပြင်ဘက်ရေသက်သေပြ,
4. အပူခံနိုင်ရည်နဲ့ anti-ချေးကာကွယ်မှု: ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာသတ္တုပိုက်များနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အပူခံနိုင်ရည်မှရေနွေးငွေ့ပိုက်အစိတ်အပိုင်းများချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုနီးစပ်သောအရပ်တို့ကိုမအတွက်အသုံးပြုသည်။
(FYT - 1) "Fuyitan" ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်နေဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းနဲ့ကိစ္စရပ်များသွားရောက်ဖတ်ရှုပါလမ်းနှင့်တံတားမှဆက်ကပ်အပ်နှံထား
ထုပ်ပိုး, ဖြန့်ဝေ ခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှု
ထုပ်ပိုး, 200kg သံစည်များနှင့်တင့်ကားကားနဲ့ (အတွင်းအဖုံးနှင့်အတူ) 1. 50kg ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံပုံး။
2. သိုလှောင်အပူချိန်5~ 35 ဖြစ်ပါတယ် ℃ ယေဘုယျဓာတုထုတ်ကုန်ပိုင်, နေရောင်ကိုရှောင်ရှား, Non-အန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်, မိုးရွာရွာ, အေးခဲ, ကျဆုံးခြင်းတားဆီး, ထုပ်ပိုးပုံးကိုထိခိုက်စေတယ်။
3. Paint စံသိုလှောင်မှုအပူချိန်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ယခင်: လမ်းနှင့်တံတား ပတ်သက်. ထုတ်ကုန်များ၏အကျဉ်းချုပ်
နောက်တစ်ခု: ခဲရော်ဘာ abutment
Baode က Ultra-မြင့်မားတဲ့မော်လီကျူးအလေးချိန် Polyethylene ...
high-မော်လီကျူးအလေးချိန် Ultra-မြင့်မားတဲ့မော်လီကျူး weig ...